Hargabka Doofarada oo qatartiisa la soo baxay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Det första allvarliga fallet av svininfluensan Foto Stig-Åke Jönsson / SCANPIX
Det första allvarliga fallet av svininfluensan
Hargabka Doofarada oo qatartiisa la soo baxay
La daabacay fredag 17 juli 2009 kl 11.33
Iyadoo meelo kamid ah dalkan laga sheegayo inuu ka jiro cudurka dilaaga ah ee Hargabka Doofarada ayaa hadana waxaa muuqato iney soo badanayaan dadka uu cudurkani ku dhacay.
Wiil dhalinayaro ah 00 22 jir ah ayaa haatan la sheegaya in xaaladiisa halis tahay luguna dawyenayo cisbital ku yaala magaala Norrköping. Wiilkan dhalinta yar ayaa wararki sheegaya in cudurkan uu ka qaaday qof eheladiisa ah oo dalka dibadiisa ka yimid.
”Xaaladiisa haatani waa mid culus oo la tacaalida cudurkan noqdo mid aan ku rakibno qalabka suuxinta, mana ahan xaaladiisa mid noloshiisa halis ku ah balse waa mid culus” ayuu yiri Christer Liedgren oo ah dhaqtar sare oo ka howl gala cisbitalka Vrinnevi ee ku yaala gobolka Norrköping.
Dhaqtar Christer waxa uu sheegay inaanu xaalada isbada badalka badan ee cudurkani aanu aheyn mid layaab ku ah balse uu u arko intey tahay mas’alad waqti oo la eegayo cida uu markale si halis ahi u soo rito. Waxaana uu farta ku fiiaqay in ninkani uusan aheyn mid horey cuduro u qabay.” Ogaantey intaan ogahay waa tii ugu xumeyd ugana halis badneyd oo Iswidhan laga helo” ayuu yiri Christer iyo kooxdiisa oo haatan ku mashquulsan sidey u bad baadin lahaayeen xaalada wiilkaasi 22 jirka ah.
Inta haatan la ogyahay cudurkan hargabka doofarafda uu haleelay ayaa tiradooda lugu qiyaasay 238, soddon qof oo kamid ah dadkaas ayaa dalka gudihiisa cudurkan kula dhacay, halka inta kalena ay meelo ka baxsan wadankan uu ugu soo dhacay ama ay kala yimaadeen